4 HAB Oo Loola Qabsado Gabdhaha Shidan Ee Aad Kula Kullanto JIIMKA | GURIGA HAWEENKA
Home » DOORKA-HAWEENKA » 4 HAB Oo Loola Qabsado Gabdhaha Shidan Ee Aad Kula Kullanto JIIMKA
Sidee loola qabsadaa gabadh joogta JIIMKA??????Haddii aad tegto goobaha Jimicsiga,waxay u badan tahay inaad halkaasi kula kullanto gabdho shidan oo aad la dhacdo muuqaalkooda.JIIMKA waxaa caadiyan issugu yimaada dhammaan dadka doonaya inay is-qurxiyaan,rajo-badana ka leh nolosha.:-
Haddaba qaababkan ayaad ula qabsan kartaa Gabarta jooga JIIMKA
U LAQABSO SI AY KALSOONI KU JIRTO
Tani waa talo yar oo muhiim kuu ah xilli walbo kahor inta aadan hadalka ku bilaabin gabdhaha.Si walba,gaar ahaan, marka la joogo JIIMKA”goobta jimicsiga”.
Waxaa kugu hareereysan RAG isku kalsoon ama kuwoo matelaya inay ka dhameystiran yihiin dhan walbo oo nolosha ah,sidaas awgeed,waxaa waajib kugu ah inaad ka mid noqoto kooxdan,si aad u gaarto hadafkaaga.
Xilliga la qabsiga Dumarka,kalsoonidu waxay ku dareensiisaa degaan iyo fir-fircooni dheeraad ah.
Marka aad la qabsaneyso gabadha,waxa ugu wanaagsan ee la isticmaali karo waa nal shiditaanka.
Billow,kaftan iyo ciyaar wada-jira,laakiin is-xakamey oo ha tarax teggin,waayo khallad ayay kuu fahmi kartaa Qalanjada.
Habkan ayuu ku billwodaa wada-sheekeysiga,waayo waxay gabadhu kuu arkeysaa nin soo jiidasho leh oo aan qarda-jeex wadin.
DIYAAR GAROWGA IYO IYO FEEJIGNAANTU WAA MUHIIM
Marka laga hadlayo qaabka loola qabsado gabdha joogta goobta Jimicsiga”JIIMKA”heegan ahaanshiyaha iyo il-dheeridu waa muhiim.
Ma ahan inaad la qabsiga billowdo xilli ay waxyaabo kale ku mashquulsan tahay,sababtoo markaas kama heleysid jawaabaha aad u baahan tahay,waxayna kuula hadleysaa si maahsanaan ah.
Sidookale,ka taxadar inaad JIIMKA ka dhigto sida goob loo shukaansi teggo,waxaa haboon inaad si kooban ula hadasho gabadha oo aad ka tegto iyadoo ku xiiseyneysa.
AMMAAN GABADHA LAAKIIN HAKA HADLIN JIRKEEDA
Ammaantu waa wax caadi ah,balse waxaa habboon in siyaabo aan jireedka ku jirin aad ugu gudbiso ammaanta. JIIMKU waa goob xasaasi ah.Isku kalsoonaan dheeraad ah oo ka badan marka ay joogto meelaha kale ayay qabtaa gabadha.
Marka, u sheeg inay tahay qof dabacsan oo aad xiiseyneyso adigoo u jeedadaadu tahay xog raadin.Haka bad-badanin ammaanta,hana kala hadlin howsha ay markaasi ku guda jirto.
KA QORO NAMBARKEEDA.
Sida aan horey ku soo sheegnayba,noqo mid diyaarsan oo islamarkiiba ka faa’ideysta fursadda,aadna u ilaaliya waqtiga.Wax walbo oo aad u sheegeyso Gabadha waa inay noqdaan qaab deg-deg ah.
U dhiib oo gacanta u geli Mobile-kaaga” telefoonkaaga gacanta” una sheeg inaad la soo xiriiri doonto oo aad xiiseyneyso sheekadeeda.
Marka ay kuu qorto nambarkeeda,isla markiiba u dir farriin qoraalleed,si aad u muujiso farxadaadda.
Ha illoobin inaad ugu mahad-celiso waqtiga aad wada qaadateen,nabad-gelina adigoo dhoola-caddeynaya.
Guul ayay kuu rajeyneysaa DOORKAHAWEENKA.COM Joogi cabsida oo la hadal Gabdhaha.
Previous: TOP-Lamaanaha is qaba ee Sariirta Wadaaga iyo Caafimaadka
Next: Sidee U Raali Gilineysaa Gacalisadaada Ama Gacaliyahaaga Oo Ka Xanaaqsan , Farsamooyinkaan Raac